जुत्ता फाट्यो ! चिन्ता नलिनुस्, नयाँ पाउन यसो गर्नुस् « Ramailo छ
जुत्ता फाट्यो ! चिन्ता नलिनुस्, नयाँ पाउन यसो गर्नुस्
प्रकाशित मिति : Oct 10, 2017
समय : 12:48 pm
तपाईंको जुत्ता फाटेको छ ? यदि छ भने चिन्ता नलिनुस् अब नयाँ जुत्ता पाउनु हुनेछ । फाटेको जुत्ता लिएर नयाँ जुत्ता दिने अभियान फिल्म ‘फाटोको जुत्ता’ निर्माण युनिटले सुरु गरेको हो । कात्तिक १७ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्मको प्रचार प्रसारलाई मध्यनजर गर्दै निर्माता अर्जुन कुमारले यस प्रकारको अभियान थालेका हुन् ।
आफुसँग भएको फाटेको जुत्ताको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरी फाटेको जुत्ता फेसबुकमा ट्याग गर्नु पर्ने छ । फाटेको जुत्ता ट्याग गरेका मध्ये दुई सय पचास जनाले मात्रै लक्की ड्र मार्फत नयाँ जुत्ता पाउँनेछन् । निकेश खड्का निर्देशित फिल्ममा सौगात मल्ल, प्रियंका कार्की, रविन्द्र झा लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । फिल्मको ‘आइएम सरी’ बोलको गीत हिट भैरहेको छ भने प्रोमो पनि रुचाइएको छ । ‘आइएम सरी’ गीत हेर्नुस् :